तपाईको यो साता कस्तो छ साप्ताहिक राशीफलबाट जान्नुहोस् भाग्य र भविष्य – Classic Khabar
मेषः– २५ गते सम्म समयले साथ दिनेछ । काम गर्न गाह्रो हुनेछ तर परिणामले सन्तुष्टि दिनेछ । मुद्धा मामिलाम जीत हुनेछ । जीवन साथिको महत्वपूर्ण सहयोगले मनमा हौसला बढ्नेछ । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ । विदेश यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । आयात निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार र शनिबार भने समयले त्यति साथ दिने छैन । अन्तिम चरणमा पुगेका काम पनि रोकिन सक्छन् । विभिन्न खालका झन्झट आईलाग्नेछ । खानपान नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । उपलब्धिका सम्भावना क्षीण हुनेछन् ।
Prevनेपालमा बालबालिकाका लागि अनुमति दियो कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप
Nextधर्ती माताको अचम्मको शक्ति, यसरी देवता उत्रिएपछि एकाएक काम्न थालिन युवती
तपाई काठमाडौं उपत्यकामा बस्नुहुन्छ ? त्यसो भए २ मिनेट दिएर यो सूचना पढ्नुहोस, तपाईलाइ आपतकालीन अवस्थामा यो अवस्य काम लाग्छ ! पढ्नुहोस उचित लागे शेयर पनि गरि अरुलाई पनि सचेत गराउनुहोस्